आज जेठ १९ः राजा वीरेन्द्र शाहको बंश नाश भएको दिन
फिदिम ।आज अर्थात् जेठ १९ गते एका बिहानै रेडियो टु…. अनि टेलिभिजन झ्याररर…. गरेको दिन, सम्पुर्ण नेपालीले अभिभावक गुमाएको दिन,दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन ।
तत्कालीन समयका नेपालीका प्रिय राजा बिरेन्द्रको सपरिवार गुमाएको दिन,जेठ १९ को त्यो कहालीलाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने गर्छ । राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थाना भइसके पनि तत्कालीन राजपरिवारको बंश नाश भएको कोहि नेपालीले बिर्सन नसक्ने दिनको रुपमा रहेको छ ।
उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको बंश नाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन । हत्याकाण्डको ७ वर्षपछि २०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्तीको घोषणा गरिएको थियो ।
राजा वीरेन्द्रपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा आसीन भए । उनीनै नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बनेका छन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनै नाश हुनेगरी राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो । उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकान्ड अहिले पनि त्यहाँका कुनै पर्खाल भित्रबाट चिहाइरहेका होलान ।